musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Vatambi vechiFrench Vanotamba Odsonne Edouard Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Odsonne Edouard Biography inopa yakazara nhoroondo yeUdiki Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Chokwadi chemhuri, Musikana, Hupenyu hwePamoyo uye Hupenyu Hwechokwadi. Kuongorora kwakazara kweHupenyu Hwake Nyaya, kubva pamazuva ake ekutanga kusvika paakazova Mukurumbira.
Odsonne Edouard Biography- Tarira Hupenyu Hwake hwepakutanga uye Great Rise. 📷: Iyo Herald, TransferMarket uye Twitter.
Hongu, iwe neni tinoziva iye mumwe weakakunda weCeltic kubva pakutonga kwaHenrik Larsson pakati pa1997-2004. Nekudaro, isu takaziva vashoma kwazvo vateveri venhabvu vafunga kuverenga Odsonne Edouard's Biography, iyo inonakidza kwazvo. Zvino pasina imwezvezve ado, ngatitangei.
Odsonne Edouard Nyaya Yevechidiki:
Kune kutanga, iye ane zita rezita- "The Rocket" uye "Magic Odsonne". Nhabvu nhabvu yakazvarwa mwedzi mishanu pamberi paFIFA 1998 FIFA World Cup- pazuva 16th yaNdira, 1998 mutaundi reKourou, French Guiana.
Kana iwe usingazive kuti Vabereki vaOdsonne Edouard vaive naye kupi, Kourou idunhu riri pamhenderekedzo yeAtlantic yeFrench Guiana, dhipatimendi rekunze kwenyika yeSouth America yekuFrance. Maererano neGoogle, nyika iri 7,086 km kubva kuFrance.
Iyi ndiyo Kourou- guta raigara vabereki vaOdsonne Edouard. Iri 7,086 km kure neFrance. 📷: Google Mepu
Edouard, mune imwe yemubvunzurudzo, akaratidza kuti akakura ari mucheche akachengetedzeka uyo pakutanga, anoda kunyemwerera kana grin kubva munzeve kuenda kune imwe. Kunyangwe pakukura kwake, hapana chakachinja kune iye anorova. Zvakare, mubvunzurudzo iyoyo, akambobvuma kuti semwana, anga asiri ngirozi. Nechekurehwa, zvinoreva kuti haana kuita zvekupusa- hapana chaityisa kugadzira mufananidzo wemhuri yake.
Pakutanga paudiki hwake, kuona nhabvu paTV uye kuenda kunhandare kwagara kuri chinhu chake. Kuda kusingaperi kwemutambo uyu kwakamuita kuti ave shasha yetsiva, iyo feat yakazomuona aine date nezveramangwana rake.
Odsonne Edouard Mhuri Dzinobva:
Sezvo iwe unofanirwa kunge waona, mutambi wechiFrance anotumira kubva kune imwe yenzvimbo idzo dziri mhiri kwemakungwa idzo dzaimbotongwa neFrance. Sezvo ataura izvozvo, zvinotevera, iwe ungafunga chero amai vake nababa vake vane mhuri yavo kubva kuFrench Guyana. Chokwadi ndechekuti, iwe unokanganisa nezvazvo.
Maizviziva here?… Vabereki vaOdsonne Edouard havasi vekuFrance Guiana kunyangwe vaine mwanakomana wavo akaberekerwa ipapo. Vese amai vake nababa vake ndevaHaiti avo nekuda kwezvikonzero zvebudiriro, vakasiya nyika kuma1980s kumafuro manyoro muFrench Guiana. Makore mashoma mushure mekuzvarwa Odsonne, uye pasina nguva, vakatamira kuFrance.
Odsonne Edouard Mhuri Yemhuri:
Kune vakawanda vanobva kune imwe nyika, dzimba dzeParis ndidzo dzakanakisa kuenda kunosimudza imba yepakati. Pakutamira kuMetropolitan France, vabereki vaOdsonne Edouard vakagara muBobigny, taundi riri munzvimbo dziri kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweParis. Ikoko, ivo vakarera mwanakomana wavo, iye akatemerwa nhabvu.
Odsonne Edouard Makore Ekutanga- Dzidzo:
Vabereki vemudiki vari pakati peavo amai na baba vakabvumira vana vavo kuti vatambe nhabvu asi vachimanikidza kusaishandisa pakukanganisa dzidzo. Muchidimbu, chikoro chaikosha kuna vese baba naamai asi kwete kuna Odsonne uyo akambotaura mukubvunzana naye Onzemondial;
Chikoro chaikosha kuvabereki vangu. Saka ini ndaingoenda chete kuzovaita kuti vafare pamwe neni. Kwete nekuti ndaida. Mumeso evadzidzisi, ndakanga ndanyanya kutevera mafaro. Iwe, ndakwanisa kuita mamakisi akanaka.
Ivo vabereki vanotsigira, kunyangwe kuda kwavo dzidzo, vakazove vane moyo wakaringana kuti vakwanise Odsonne pakuedza basa renhabvu nekirabhu yemuno, AF Bobigny. Pazera ramakore matanhatu, mudiki akanyoresa kukirabhu kwaakatanga mhando yedzidzo yaaida.
Odsonne Edouard Biography- Kuramba Kwepakutanga Hupenyu:
Nekufamba kwenguva, tarisiro dzekuve nyanzvi yebhola bhora dzakakunda pamusoro pekuenda kuchikoro. Mudiki Odsonne akatora kushoma hanya mufundo yake yechipiri achizvipa nguva yakawanda yekutsvaga rake basa. Kutsunga kwakatungamira pakubudirira kwakateverwa, uye makore matatu chete mushure mekujoinha AF Bobigny, mudiki uyu aive atotanga kurova zvibodzwa nekuunganidza misungo.
Iye murume wechiFrench ari mutorwa HAPANA naTrophies kubva paudiki. Sezvacherechedzwa, akahwina mubairo wevapihwa mubairari achiri kuAF Bobigny. 📷: Twitter
Kuita muchina-wekuvhiya muchina pazera nyoro zvakadaro zvaireva chinhu chimwe. Icho chaive chokwadi chekuti kirabhu hombe kuFrance yaizomuona uye pasina imwe nguva, vakapamba kirabhu yake diki, AF Bobigny nekuda kwake siginecha.
Odsonne Edouard Biography- Nzira yekuFame Nhau:
Isingazivikanwe nevazhinji mafani, iyo yePSG Qatari kutora yakanga isiri nezvekutenga matarenda epamusoro- senge sa Blaise Matuidi uye Marquinhos etc. Zvakanga zvakare nezve zvekudyara mari muhudiki academy. Gore iro ra2011, Odsonne akabata pfungwa yePSG scout nenzira isingawanzo. Iye zvino ngatitii tikuudze icho chikamu cheBiography yake.
Maitiro aOdsonne Akazova Mutambi wePSG:
Maererano ne MuDembaRecord, Mutungamiriri mukuru weParis Saint-Germain akamanikidzwa kusiya hurongwa hwekutarisa hunyanzvi hwevechidiki hwakazobviswa nekuda kwemamiriro ekunze akashata. Pane kudaro, akafamba achiona AF Bobigny uko Edouard akaitika achitamba. Mukukurukurirana na The Athletic, Reynaud akati akarohwa nekukwanisa kwechidiki, iro rwiyo rwakaita kuti atore chikirabhu, kusanganisira kuwana vabereki vaOdsonne Edouard kubvumidzwa kwake kusaina.
? Pakutanga, ndainakidzwa nekujoinha PSG. Kuziva kuti ndaizogovera padenga rimwe chete sevazhinji vevatambi vakanakira muFrance, ndakafara.
Ndinoyeuka, zuva randakanga ndisati ndasiya mhuri yangu. Handina kurara husiku hwese nekuti ndaive ndakurumidza kuenda (kunyemwerera).
Akadaro wechidiki pa account yake yekujoinha PSG. Mhuri yemhuri yaOdsonne Edouard yaive nenguva yakaoma yekufamba naye. Kunyangwe nekukurumidza, kusiya vabereki vake nevadikani kumashure kwaive kwakaoma. Nechemumoyo, mukumbiro yekudzora kusurukirwa kwemwanakomana wavo, baba vaOdsonne vakasundira PSG kupa mwana wavo, kushanya kwemhuri vhiki nevhiki.
Iyo Turning Point yekubudirira- UEFA European Mbiri:
Mugore rake rekupedzisira akananga kudzidzo yevechidiki, Odsonne akashevedzwa nemutungamiri wechikwata cheFrance U17. Kutenda nekuda kwechinangwa-chake chekuona hunyanzvi nePSG, wechidiki akasarudzwa kuti atore mukombe we 2015 UEFA European Under-17 Championship.
Maizviziva here?… Iyo Magidhi Odsonne padivi Dayot Upamecano uye Zinedine Zidane's Mwanakomana Luca vaive pamwe avo vakabatsira France kusimudza mukombe wakakura. Kuwana mukombe uyu kwaive kusakwana, zvirinani, muchina wevaridzi wechidiki akabata topropa yemakwikwi mubairo aine zvibodzwa zvake zvisere.
Odsonne Edouard Biography- Simuka kune Mukurumbira Nyaya:
Panzvimbo pekugumburwa, mutambi wechidiki uyu akaramba achikura kubva pasimba pasimba nekusimba rake -kufunga zvibodzwa. Mumwaka wePSG 2015-16, mwaka wemashura akahwina zvibodzwa makumi matatu nematanhatu mumitambo makumi maviri neshanu, rwiyo rwakamutora iye Titi d'Or. Uyu ndiwo mubairo wakavhoterwa wemumhanzi wepwere wechidiki, uye yakambohwinwa nawo Kingsley Coman. Zvekare, nyeredzi yeFrance-Guyana yaive chikamu chechikwata chinobatsira PSG kuhwina mukombe weAl Kass.
Tarira, kubudirira kweR Rocket zvakare, semutambi wechidiki. Akave neimwe yeakanakisisa emabasa evechidiki muBhora. 📷: Instagram
Mushure mekusaina chibvumirano chehunyanzvi neParis Saint-Germain's mukuru wedivi, Odsonne sevazhinji vechidiki vakapedza kudzidza - kufarirwa kwa Yacine Adli- akatanga kuongorora mukana wekuwana hembe-yechikwata hembe. Iko kusakwanisa kubuda kunze Edinson Cavani yakatungamirwa kuenda kune yekuenda kune chikwereti kufambisa.
Kutevera isingafadzi chikwereti kuperetera naToulouse, Odsonne akatanga kufunga kunze kwenyika. Imwezve chikwereti chekutamira kuCeltic chakava chinhu chakakodzera. Kune Hoops, Mashanya Odsonne akawana yake Goal MOJO. Zvinokwikwidza zvibodzwa makumi matatu nematatu echirabhu zvakavabatsira kuti vaise chiratidzo chavo “chakagwinya.”
Magic Odsonne aive mumwe weavo vakabatsira Celtic kuhwina iyo 2018-2019 Domestic treble pasi paBrendan Rodgers. 📷: IG
Sezvo panguva yekunyora Odsonne Edouard Biography, vateveri venhabvu vanomuona ari pakati peimwe Vechidiki makumi mapfumbamwe vechidiki vechidiki. Kunge Moussa Dembélé, Rocket ine mukana wekuva ramangwana reFrance nhabvu. Vamwe vese, sezvavanotaura (kusanganisira kuratidza pazasi), yave nhoroondo.
Odsonne Edouard Hukama Hupenyu- Musikana, Mukadzi?
Nemagariro ese akakwidzwa kusvika zvino muhudiki uye basa rake repamusoro, tinoziva zvisingaite kuti mukwikwidzi weFrance arege kuve nevakadzi vanoyemura.
Asides izvozvo, kuve super Rich, Tall uye Handsome zvakatokwana kukwezva vangangoita vasikana uye avo vanozvitora sevakadzi zvinhu. Saka mubvunzo wekupedzisira ndewekuti;
Odsonne Edouard's Girlfriend ndiani? … Akaroora here?… Ane Mukadzi here?
Vazhinji Fans Fans vakabvunza- Ndiani Odsonne Edouard's Girlfriend? … Akaroora here?… Ane Mukadzi here? 📷: Picuki
Kutonga kubva pamufananidzo weOdsonne Edouard hukama hwehukama, iwe unozoona yake yazvino yekutarisa- inova bhora. Zvinogona kunge kuti muFrance murwi, sepamazuva atiri kugadzira Biography yake, anogona kuve nemusikana webasa asi aramba kuita hukama hwake pachena - pamwe kwete panguva ino yakaoma yebasa rake.
Ko isu taizviziva sei? ... Zviri nekuti akambobvuma kuti anga achirwisa zvakaoma kuramba miedzo.
Odsonne Edouard Hupenyu hweMunhu:
Kusvika pakuziva chimiro chake kubva pagomba zvaizokubatsira kuti uwane mufananidzo wakajeka wemunhu wake. Kutanga kubva, Magic Odsonne mumwe munhu anonzwa akasununguka chaizvo neiyo yepasi profil yaanoisa kumusoro kwegomba. Pasinei nezvose ZVAKAWANDA, vanhu havana kumunzwa kunze kwebhola. Imhaka yekuti mukwikwidzi, sezvakaratidzwa mune kubvunzana, munhu akashata. Mumashoko ake;
Kunze kwenzwi, vateveri venhabvu vanondinzwa zvishoma nekuti ndiri munhu akangwara. Ini handifarire zvikuru kuratidzira kunze kwebhola. Pane kudaro, ini ndinofarira kuratidza ini chete pasi.
Odsonne Edouard Hupenyu hweMunhu. Pano, anogara zvakanaka muchigaro chegaro chake chekugara, kubvunzurudzwa nezveunhu hwake. Chikwereti: Onzemondial. 📷: Onzemondial.
Batirira; kune humwe hunhu hwakanaka hwaainayo. Anorova munhu asingakurumidzi kutsamwa. Rocket inogona kuteerera kune avo vanotsoropodza, kunyangwe avo vanomutonga zvisizvo. Kwaari, Akashata Tsoropodzi, mumaonero ake Akanaka. Zvinomubatsira kuti afambire mberi uye agadzikise somunhu.
Odsonne Edouard Mararamiro:
Iyo yekumberi, hapana mubvunzo, inokoshesa yake yazvino madhora mashanu emamirioni yeNet Worth, € 5K vhiki yehomwe muhoro uye € 40million muhoro wepagore. Chokwadi ndechekuti, Odsonne Edouard haana dambudziko rakawanda kurarama hupenyu hwepasi.
Kutambisa mari kuita kuti imba yake iratidzike zvakanaka zvakangomukwanira. Chekupedzisira, mutambi wenhabvu haatendi mufungwa yekuratidza kubhururuka, senge posh mota nedzimba hombe (dzimba) nezvimwe.
Odsonne Edouard Mararamiro- anofara anorova, anofarira kugara zvakanaka mumba make akareruka pane kuisa mari mumotokari dzeposh. 📷: Instagram
Odsonne Edouard Hupenyu hwemhuri:
Kune vakawanda vanofamba nhabvu, nzira yeku stardom ingadai isina kunyatso kunakisa sezvayakaita pasina rubatsiro rwemhuri. Muchikamu chino, tichakuudza zvimwe pamusoro pevabereki vaOdsonne Edouard uye imwe nhengo yemhuri- hanzvadzi yake.
Nezve baba vaOdsonne Edouard:
Kutanga, isu tinokudza baba veHaiti nekuda kwezvinangwa, zviroto uye zvishuwo zvavanoisa, kwete kwaari chete, asi kwemwanakomana wake. Semuenzaniso, akavesa nzira uye akabvumira Odsonne kuti ararame zviroto zvake zvekuva mutambi wenhabvu pane kuomerera nedzidzo isina kumushandira. Ngatisakanganwewo kuti baba vepamusoro vaisundira sei PSG kuti vabvumidze kushanya kwevhiki kuitira kuti Edward mudiki ave pedyo nemhuri.
Pamusoro paamai vaOdsonne Edouard:
Kuverenga kuverenga vateveri vebhola Onze Mondial, tinotenda kuti mai vake ndivo mabviro ekubikira mumhuri; a feat akaderedzwa kuenda kumwanasikana. Kutenda nerutsigiro rwemhuri rwakavamba kuburikidza naye, Odsonne ikozvino akadzidza nzira yekubika French ne Italian gastronomy. Zvakare, pasita neBolognese sosi, curry mupunga uye nyama svutugadzike.
About Vanababa vaOdsonne Edouard:
Mukukurukurirana kwenhabvu nana Onze-Mondial, tinoona kuti ane hanzvadzi yake mukuru yakambopa ruoko rwechikwereti pakudzidzisa nzira yekubika. Maizviziva here?… Hanzvadzi yaOdsonne Edouard inyanzvi yemubati iyeye wa2019, akashanda muresitorendi inobika zvakanaka. Anorova achiri mudanho rebasa raakambogara neimwe hanzvadzi yake mukuru vasati vaenda kuimba yavo yekugara.
Odsonne Edouard Untold Chokwadi:
Muchikamu chekugumisa chedu nyaya yeChidiki uye Biology kunyora, tichakupa ruzivo iwe ungangodaro usati waziva nezveFrance nhabvu pamberi. Pasina imwezve ado, ngatitangei.
Chokwadi #1- Akambosungwa Kuti apfure munhu akapfuura-na:
Chiitiko ichi chakaitika shure mumakore ake okuyaruka uye achiri kukwereta naToulouse. Odsonne (ane makore gumi nemasere) anonzi akambobatwa paCCTV mumota make nguva isati yaitika kuti munhu adhonze 'Airsoft' pellet mumusoro wevatorwa.
Paakanga achiri pamapurisa mushure mekusungwa kwake, mukomana achiri kuyaruka akaramba mhosva iyi, achiti akange akwereta mota yake kushamwari yezuva iro. Zvinosuruvarisa, akawana mwedzi mina yekumiswa mutirongo, faindi ye6,000 uye akaraira kubhadhara € 2,600 mukukuvara. Kurangwa kwacho hakuna kuzopera ipapo; akawana kurambidzwa kutakura zvombo kwemakore mashanu.
Chokwadi #2-Mubhadharo Kuputsa uye Kuenzanisa kune Avhaji Citizen:
Kwegore € 2,083,200 $1,806,983 £ 1,463,808
Pamwedzi € 173,600 $150,582 £ 121,984
Pa Vhiki € 40,000 $34,696 £ 35,564
Pazuva € 5,714 $4,957 £ 5,081
Pa Awa € 238 $207 £ 212
Per masekondi € 0.06 $0.06 0.06
Izvi ndizvo zvakaitwa naOdsonne Edouard akawana kubva pawakatanga kuona peji ino.
Tichifunga nezve iko kupatsanurwa kuri pamusoro, zvinokushamisa iwe kuziva kuti avhareji mugari wemuScotland anowana $ 2,613 pamwedzi zvaizofanirwa kushanda kwemakore mashanu nemwedzi minomwe kuti awane Odsonne Edouard 'pamwedzi weCeltic.
Chokwadi #3- Zvinotaurwa neFans nezve ake FIFA Stats:
Vamwe vateveri vakatsoropodza Odsonne Edouard nekutamba mumakundano akaenzana neFrench League 2. Vamwe vanoti akawedzera apo vamwe vanomuda, vanoda timu yepamusoro seArsenal kuti ipinde mungozi.
Nekudaro, kutarisa kwedu STAT yake stats inoratidza Guiana-akazvarwa anorwisa haasi kuita zvakaipa. Odsonne ane hunhu hwakafanana neFIFA kune hwomumwe mutambi weFrance, Marcus Thuram.
FIFA stats inoratidza kuti angave Bhomba mune Remangwana
Kuti uwane chokwadi chinokurumidza, takagadzirira tafura inopfupisa Odsonne Edouard's Biography.
Zita rizere: Odsonne Édouard
Akazvarwa: 16 Ndira 1998 muKourou, French Guiana.
Vabereki: Vese amai naBaba ndeveHaiti Mhuri yemhuri.
Sibling: Ane hanzvadzi iri mubishi.
kukwirira: 1.87 metres kana 6 tsoka 2 inches.
Dzidzo: Kudzidziswa kusvika kusekondari. Coud haakwikwidze Bac yake STMG nekuda kwebhola.
Source of kukurudzira: Cristiano Ronaldo
Hobby: Kurara uye Kutarisa TV Series
Net yakakosha: Mamiriyoni mashanu emadhora (5 stats)
Basa Rechinangwa: Kuti uve mumwe wevanorwisa zvakanakisa muEurope.
Tinotenda nguva uye kushanda nesimba kwakaitwa kuverenga iyi tsamba refu paOdsonne Edouard's Biography. Isu tinotenda kuti haana kuwanda uye ane mukana wekuva iwo we Zvakanakisa Strikers muEuropen Nhabvu.
Ndapota tiudze zvaunofunga nezve yedu kunyorwa mune chikamu chikamu. Zvakare nezve wenhabvu, semuenzaniso, anogona kunge ari iye akakwana Olivier Giroud kutsiva kwechikwata chenyika cheFrance?